Kedu achịcha kachasị mma maka nha? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Achịcha dị mma maka gị - otu esi edozi
Achịcha dị mma maka gị - otu esi edozi
Kedu achịcha kachasị mma maka nha?
N'ime otu ọmụmụ, ndị mmadụ nwere obere kalorinrinke ahụ gụnyere mkpụrụ ọka, dịka ọka wit dumachịcha,furu efuọzọ afọabụbakarịa ndị riri nanị mkpụrụ ọka a nụchara anụcha, dị ka ọchaachịchana osikapa. Mkpụrụ osisi dum na-enye vitamin, mineral, na fiber karịa nke a nụchara anụcha. Ma overdocha ọka wit dumachịchanwekwara ike itinye pound, kwa.Eprel 3 2014
Today'sdị Achịcha 5 Ahụ Ike Kachasị Mma N'ụwa taa nke ihe oriri na-edozi ahụ, achịcha nwere ihe na-adịghị mma. N'ọtụtụ atụmatụ oriri na-ewu ewu maka ahụike na ọnwụ ọnwụ, nri dị n'ọtụtụ carbohydrates dị ka achịcha na-abụkarị ihe mbụ ịchọrọ. Ma obughi otutu achicha dikwa iche: achicha achicha esichara abughi nri ndi na-eri nri, mana enwere achicha ndi ozo n’ad nwere ike inye obere obere ihe n’iru nri.
Kedu ụdị achịcha ịchọrọ maka oge ọzọ ị ga-azụ ahịa? Taa, Bestie na-eleru ụfọdụ achịcha mara mma anya. Anyị na-agbanye akwụkwọ ọhụụ mgbe niile ka ịdenye aha na Bestie ma gbanye mgbịrịgba ngosi iji soro vidiyo na ọdịnaya anyị kwa ụbọchị. Achịcha Mkpụrụ Ogbe Mgbe a bịara n’ihe banyere achịcha, ụdị abụọ ndị na-azụ ahịa nwere ike ịma nke ọma bụ ọka ọcha na ọka wit dum.
N'ime ha abụọ, achịcha dị pasentị 100 zuru oke na-arụ ọrụ nke ọma karị. N'adịghị ka achịcha ọcha achicha, achịcha ọka dum na-eme ka ọka niile ghara ịdị na-eme n'oge a na-eme usoro, na-ahapụ akụkụ dị iche iche dị ka nje, endosperm na bran site na ịhapụ akụkụ nke ọka ahụ n'ọnọdụ Ebe Achịcha ọka niile nwere uru dị elu nke ọdịnaya karịa. ọ buru na ewepụ ya; Na mgbakwunye na ịnwe eriri dị elu, bran na ụmụ irighiri ọka bụ ihe bara uru nke nri ndị ọzọ dị ka protein na abụba, yana vitamin na mineral ndị ọzọ dị iche iche. N'ụzọ dị iche, ọka a nụchara anụcha nke achịcha ọcha na-ahapụ ọtụtụ n'ime ihe ndị a dị mkpa site na iwepu bran na nje na-eme achịcha.
Na mgbakwunye na uru ndị a na-edozi ahụ, achịcha ọka niile nwere ike ichekwa ahụ gị pụọ na ụdị nsogbu ahụike dịka ọrịa obi, ụdị ọrịa shuga 2, na ọbụna ụfọdụ ụdị ọrịa kansa. Agbanyeghị, afọ ekwesịghị iju gị naanị obere achịcha izizi ị hụrụ na ụlọ ahịa na “ọka niile” na aha a: ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-akụkarị mkpụrụ “ọka niile” na bekee ka ngwaahịa ha pụta gbasie ike, n'agbanyeghị ma achicha ahụ n'onwe ya mere n'ejighị ntụ ọka a nụchara anụcha.Jide n'aka na emere achịcha ahụ site na pasent 100 zuru oke ma ọ bụ ntụ ọka zuru oke, ma zere achicha ejiri na ma ọ bụ ihe ndị na-enweghị isi dị ka agbakwunye shuga ma ọ bụ mmanụ oriri dị ka isi ihe na-emegide ọka a nụchara anụcha Mkpụrụ ma ọ bụ ntụ ọka.
Ihe dị iche bụ na, dị ka aha ahụ na-egosi, a na-eme achịcha ọka etolite site na ngwaahịa ọka niile malitere ịmalite, nke pụtara na mkpụrụ ọka amalitela ito ebe ọ bụ na mkpụrụ ọka eji eme achịcha bụ n'ezie mkpụrụ yana site na ikwe ka mkpụrụ ndị a germinate tupu ị mee ha achịcha, ịnwere ike ịnweta ọtụtụ uru ndị ọzọ na-edozi ahụ. Dị ka otu nnyocha si kwuo, achịcha e ji achịcha nke sitere pasent 50 pupụta ọka wit nwere nnukwu ọdịiche na uru nri, nke nwere ihe karịrị okpukpu atọ karịa folate karịa ụdị achịcha ndị ọzọ. nke antioxidants na achịcha mgbe na-ebelata ego nke ogige ke achịcha na-egbochi absorption nke ụfọdụ vitamin na mineral dị ka ígwè.
Usoro nke ịmị mkpụrụ na-agbari stachi na ọka, nke na-ebelata mmetụta achịcha na shuga ọbara gị. 3. Sourdough Sourdough bu udi achicha nke emere site n’usoro puru iche nke gunyere iko eko nke yist na nje nke n’eme ka nri achicha.
Usoro ịgba ụka a bụkwa ihe ama ama na ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ibelata ọdịnaya phytate nke achịcha ruo pasent 50 ma e jiri ya tụnyere ụdị achịcha ndị ọzọ nke achịcha na-eme achịcha pụrụ iche nke na-eme ya n'ihi mgbatị dị elu nke. na-emekwa ka ọgwụ mgbochi na probiotics dị mfe igwu, nke nwere ike inyere eriri afọ gị aka na usoro nri. Ọzọkwa, achịcha gbara ụka dị ala dị ala nke pụtara glycemic pụtara na, dịka mkpụrụ ọka etolitere, mmetụta nke ihe ọ onụ sourụ na-egbu ọbara shuga dị obere, ọ ga-eme ka ọnọdụ gị 'dị njọ.' Oatbread Dị ka aha ya na-egosi, oatbread bụ ihe ijuanya na achịcha ejiri ọka jiri me ihe dị ka isi ihe.
Na mgbakwunye na ọka oat, achịcha oat na-ejikwa ihe ndị sitere n'okike dịka ntụ ọka wit dum, yist, na mmiri, nke, ọ bụrụ na ị gbasoro ndepụta a ugbu a, bụ ezigbo akara na usoro nke uru ahụike ga-eji uru ọka niile kama nke ntụ ọka a nụchara anụcha ma ọ bụ nke a haziri amị bụ ọka oat na oatbread e jikọtara ya na ọtụtụ uru ahụike ọzọ, gụnyere magnesium, vitamin B1, iron, na zinc. Oats bụkwa isi ihe dị mkpa nke eriri, karịsịa ụdị eriri a maara dị ka beta-glucan. Ekwuru na Beta Glucan ga - enyere aka belata ogo ogo cholesterol gị ma debe ọbara shuga gị n'ọkwa dị mma.
Dị nnọọ ka iji achịcha ọka, gbaa mbọ hụ na ị na-eleba anya n’ihe ndị dị na ya mgbe ị na-azụ ahịa iji hụ na ị na-enweta nkwa ahụ; Ọtụtụ ndị a na-akpọ 'oat achịcha' nwere ike ịnwe naanị obere oatmeal na ọbụnadị enwere ike iji ntụ ọka a nụchara anụcha na shuga tinye. Otu ihe ọzọ mere ị ga-eji zụọ ahịa ịzụ ahịa ma jide n'aka na ị maara kpọmkwem ihe? Ha tinyere n’elu efere gị. 5.
Achịcha Flax Achịcha Flax bụ ụdị achịcha emere site na nchịkọta ntụ ọka wit na mkpụrụ flax, echere m na ọtụtụ n'ime aha ndị a mara mma na imi, nri? Mkpụrụ flax bụ mgbakwunye na-edozi ahụ dị ukwuu na atụmatụ nri ọ bụla, nke pụtara na flax flax nwere ike bụrụ otu n'ime nhọrọ achịcha kachasị mma ịhọrọ. Maka ndị na-ebido ebido, flaxseed bụ isi mmalite bara ụba nke alpha-linolenic acid, ma ọ bụ ALA, omega-3 fatty acid nke ụfọdụ ọmụmụ na-atụ aro nwere ike belata ohere nke ọrịa obi mgbe ejiri ya mgbe niile. Na mgbakwunye na nke a, osisi flax na-enyekwa ọtụtụ uru ahụike ọzọ, gụnyere cholesterol ka mma, mgbali elu mgbali elu, na ịchịkwa ọkwa shuga dị n'ọbara gị nke ọma.
Mkpụrụ osisi Flax nwekwara antioxidants a maara dị ka lignans nke nwere ike inye aka gbochie ụfọdụ ụdị ọrịa kansa ị na-eme; Agbanyeghị, nyocha banyere ihe mgbochi ọrịa kansa nke lignans, ya mere flaxseed, bụ isiokwu nke mkparịta ụka, ndị juri ahụbeghịkwa ma ọ bụrụ na ha dị irè n'ichebe ahụ gị pụọ na kansa, ndị mmadụ na-a attentiona ntị karịa mgbe ọ bụla nri ha na-eri. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime anyị amalitela ịtụgharị uche n'ihe oriri anyị kwa ụbọchị ka anyị wee nwee ike ịhọrọ nhọrọ ahụike karịa ma zere nri anyị chere na ọ ga-emebi ahụ ike, ma a bịa n'iri nri n'ụzọ ziri ezi, imega ahụ ma jigide ndụ dị mma, achịcha bụ otu n'ime ihe mbụ a na - ewepụkarị na nri ndị mmadụ iji bie ndụ nwere ahụike karị. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na achịcha sitere na ntụ ọka a nụchara anụcha ma bụrụ nke na-adighi mma na ọ kachasị mma n'akụkụ ụzọ.
kọfị free radicals
Enwere ụdị achịcha ndị ọzọ na - enye nri karịa ka ị nwere ike ịtụ anya, ọ bụ mkpebi ka mma ị ga - enyocha ihe ndị dị na achịcha gị ma mee mkpebi ịzụrụ nke ọma iji hụ na ị ga - enweta nri na - edozi ahụ kacha mma maka ego gị. Ajụjụ: Gịnị ka i chere? Nke a ọ bụ edemede kachasị mma kemgbe achịcha sliced? I nwedịrị ike ịjụ rye, anyị nwetara isiokwu a, na-arụ ụka na mgbe a bịara n'ihe oriri na-edozi yist, achịcha kwesịrị ịbụ nchegbu anyị; anyị na-enwekarị mmasị ịnụ nzaghachi sitere na ndị na-ele isiokwu anyị.
Biko biko gbadaa na ngalaba okwu dị n'okpuru ma hapụ echiche gị iji mee ka mkparịta ụka a gaa n'ihu.
Kedu ụdị achịcha dị njọ maka gị?
Nnukwu ntụ ọka na agbakwunye na ọcha, nchịkọtaachịchanwere ike ime ka ọ ghara ịdị mma. Na-eri oke ọchaachịchanwere ike itinye aka na oke ibu, ọrịa obi, na ọrịa shuga. Otú ọ dị, ịzụachịchaeji okwu ahụ bụ “ihe niile” eme ihe dị ka nke mbụ na-ekweghị nkwa ngwaahịa na-enye ezi ndụ. Ọ bụ naanị nzọụkwụ mbụ.
Lelee isiokwu a iji chọpụta ma achịcha adịghị mma maka gị n'ezie. Ọ dị ka ịnwale iri nri dị mma taa bụ ihe mgbagwoju anya karịa mgbe ọ bụla mgbe anyị were isiokwu achịcha, dịka ọmụmaatụ. A gwara anyị ma ọ bụrụ na anyị eri ya ọ ga-emebi ahụ ike anyị ka ị mara na ugbu a, mmadụ niile nwere mgbagwoju anya ma a bịa na iri nri siri ike, ọ dị gị ka ị gaghị eri ihe ọ bụla ma nke a bụ ihe anyị ga-ekwu maka achịcha Akụkọ a. regonna na-ekwu banyere ekwukwa n'akwụkwọ uru achịcha anyị ga-ekwu okwu banyere ọcha achịcha vesos dum ọka achịcha na mgbe na njedebe nke isiokwu a ihe m ga-eme bụ inye gị ihe kasị mma achịcha nhọrọ ịhọrọ site na, ma tupu anyị bido m Doctorzorroski ma nabata ọwa ahụ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ọwa ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịnwe gị ebe a, denye aha na Bell Alert ma sonye na obodo ngosi anyị nke nwere ike inyere ahụike celyour na ndụ gị aka ka anyị gaa n'ihu ma ugbu a banye n'ime achịcha, mgbe anyị lere achịcha anya, otu n'ime ihe ndị mmadụ na-agwakarị m bụ nke ọma na ị maara na ndị mmadụ na-eri ya oge niile kedụ ka ọ ga-esi bụrụ ahụike, ihe ziri ezi bụ na anyị ga-eburu n'uche Ebe a bụ na e nwere otu nnukwu ọdịiche dị n'etiti achịcha anyị na-eri taa na achịcha ndị nna nna anyị riri, ọ dị iche usoro r, ọ bụ usoro dị iche nke ejiri mee ya, ọ bụkwa ụdị ọka wit dị iche iche ha jiri tupu stof tha A na - eji ya taa, ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị elee achịcha ahụ anya nke ọma, ọ dị mma, anyị na - ekwu maka ntụ ọka ọcha ọcha anyị na - ekwu maka achịcha bara ọgaranya ị maara na ọ na - edozi ya nke ọma, dịka m kwuru, ga - eme bụrụ ndị a na-apụghị ịmata amata ọbụna na nna nna anyị hà jupụtara na nchekwa, ị maara na enwere ihe kpatara achịcha bụ Enwere ihe kpatara na ị nwere ike ịga ebe nri ngwa ngwa kachasị amasị gị - ha nwere ike iburu achịcha ahụ ebe ahụ ọ gaghị adaba na ndị nchekwa ahụ bụ ihe na-adịghị mma na ahụike na-enwu ọkụ na nsị anyị, yabụ na anyị ga-akpachara anya maka ngwongwo ahụ ma jide n'aka na anyị zere ya, ọ na-agbanwekwa mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụrụ na anyị ele ya anya achịcha taa sitere ọka wit, ya bụ na ọ nwere gbanwere afọ ole na ole n'ụzọ ha nwere ike n'ezie nweta a elu mkpụrụ na anyị na-na-achọ na a kpamkpam dị iche iche ụdị ọka wit karịa ndị nna nna anyị iji na-eji mmiri nke achịcha kpamkpam dị iche iche na otú anyị nwere mara nke ahụ na anyị ga-elele ya anya site na ihe ọzọ dị na efere gị, ọ bụrụ na anyị lelee ndị nna nna anyị n'ime gị, ị maara otu anyị si ele nri taa, achịcha gaara abụ ihe kachasị njọ ha rie nri ụbọchị niile Right, ha ga-eri somenuts, ha ga-eri mkpụrụ osisi bekee, ha ga-eri anụ, ma rie ya achịcha, ọ bụ ya bụ ọrụ.
Ma na ọha mmadụ taa, ndị mmadụ na-anọdụ ala maka nri ehihie site na iji sandwich na french fries Na-eri nri na lemonade, yabụ achịcha na-aghọ isiokwu dị mkpa, ọ bụghị naanị achịcha na-ebibi ahụike gị, achịcha ya na ndị ọzọ niile. ọbụghị naanị otu? Emere ya, ma otu a ka nri ndị ọzọ ị na-eri, ya mere anyị kwesịrị iji ezi uche bịakwute ya ugboro ugboro, ugbu a na-esote ebe a Achọrọ m ikwu maka ụdị nri nri na-edozi ahụ, yabụ mgbe anyị lere achịcha anya, ọ dị oke ala na nri ndị dị mkpa, ọ dị mma ị maara achịcha bụ? nke nwere nnukwu carbohydrates dị obere na abụba na protein ị maara na ọ naghị adị mma ebe a maka achịcha dị ala karịa obere fiber na invitamins dị oke ala ugbu a ọtụtụ mmadụ agaghị ajụ nke ọma, ị maara na ọ ka mma iri nri niile achịcha n'ihi na ị maara ihe? Aghọtara m na achịcha ọcha dị njọ n'ezie, mana achịcha ọka wit niile bụ nhọrọ ka mma, nke ziri ezi, nke bụ eziokwu bụ na ha dị otu ihe ị maara, ọ bụrụ na anyị elee achịcha ọka wit niile ma e jiri ya tụnyere achịcha ọcha, achịcha ọka wit niile. enweghi ezigbo ihe oriri na-edozi ahụ, enwere di na nwunye dị iche iche dị iche iche nke na-akara elu, ha nwere ntakịrị fiber n'ime ha, mana n'ozuzu ọ bụghị nke ka mma yana yabụ mgbe anyị lebara achịcha ọcha anya na nke gị Achịcha ọka wit nke ọdịnala ị ga-enweta ọtụtụ nke ga-enweta otu ụdị nri na-esi na ya pụta ma ọ bụghị nnukwu ka anyị wee buru nke ahụ. Ka anyị gaa n'ihu lelee nnukwu ọdịnaya carbohydrate n'ihi na ọzọ anyị kwurula banyere ya na ọ bụghị nnukwu nri, mana n'ezie ọ dị elu na carbohydrates ihe ị ga - eme ya bụ na ọ dị oke glycemic ma yabụ Na - eme ọbara shuga na-ebili ngwa ngwa. Naanị gosi na ị maara na ị na-eri achịcha ọka wit, achịcha ọcha yana ọ metụtara oke ibu, ọ metụtara ụdị ọrịa shuga 2 metụtara ọtụtụ nsogbu ahụ ike dị iche iche ndị mmadụ nwere n'oge a ọ metụtara ọtụtụ nsogbu mbufụt nke bụ n'ezie ihe kpatara ọrịa obi, ọrịa kansa, na ọtụtụ nsogbu ndị a, yabụ ugbu a, anyị kwesịrị ịghọta na ugbu a, nke a bụ ihe ọzọ ị ga-atụle, na nke a bụ ezigbo nri na-edozi ahụ, carbohydrate efu ị na-aga ugbu a ' t mee nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị ewere achịcha ọcha wee tulee 2. na ọ bụ carbohydrate na anyị ji ya tụnyere carbohydrate ọzọ nke ga-adị ka nduku ụtọ na nduku na-atọ ụtọ na ị nwere ike nweta ọtụtụ ụdị nri na-edozi ahụ. Ọ bụ ya, ekwuru m na enweghị ọtụtụ achịcha ọcha ahụ yabụ na ị na-eche banyere carbohydrates anyị chọrọ im Oge ọ bụla ị karịrị carbohydrates na-edozi ahụ, ọ bụghị na ihe niile ị ga - eme bụ izere carbs kpamkpam, naanị anyị kwesịrị ịme mkpebi ka mma iji th Ndị na-enye carbohydrates na-edozi ahụ ga-abụ nke ụzọ ị ga-aga ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye ahụike gị ugbu a.
Ọzọ anyị kwesịrị ileba anya na mmiri ọgwụ na-egbochi ya metụtara, ya mere na ọ bụghị naanị na ọ daa, o nwere ọtụtụ nri, ọ nwere n'ezie nri niile ọ nwere ike inye, ọ nwere ike ịka njọ ma nwee ihe akpọrọ phytic acid, na nke ahụ phytic acid ihe ọ na-eme ọ bụ ya na - egbochi absorption, mgbe ọ bịara n’ihe metụtara mineral dị ka zinc iron gịnị ka ọ ga - eme? bu isi banye ma gbochie ha ka i wee tinye ha ka i wee mara otutu ndi mmadu na ekwu okwu banyere ichota acid, olee ihe ojoo o diri gi n'ihi na o nwere ike ibute erughị eru ugbu a na-arapara na njedebe otu oge, n'ihi na ihe m bụ aga ime bu otua isi zere nke a na achicha ma ugbua anyi nwere otu ihe ozo anyi ga echebara echiche, nke a bu na o kariri na mkpuru oka nile ka ndi mmadu wee chee nke oma achoghi m iri achicha ocha a mana m ga eri nri achicha dum. Ọfọn, ịlụ ọgụ megide ya ga-adị elu karịa na achịcha ọka wit niile ka ọ ghara ịlaghachi ọzọ. Ọ naghị adị mma karịa ka ị na-achọ ịkwaga nhọrọ ahụike. N’ezie, ị nweghị ike ikwu maka achịcha n’ekwughị banyere gluten n’ihi na ọ bụ isiokwu dị mkpa na ọha mmadụ taa.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe anyị kwesịrị ile anya, yabụ gluten bụ nke mbụ na protein kachasị dị ugbu a na ọka wheat, ọ dịkwa oke ọkụ. Ọtụtụ mmadụ enweelarị ọtụtụ nsogbu na-adịghị mma n'ahụ ha, yabụ ịgbakwunye nke a anaghị inye aka n'echiche ọ bụla dịkwa oke emerụ na nsia nsị ya mere na anyị chọrọ ijide n'aka na ị maara na anyị na-ezere ya maka nke a na mgbe ahụ enwere nsogbu enwere nsogbu dị ka ọrịa celiac ya mere enwere ọtụtụ ndị nwere ọrịa celiac. Ọ bụ ọrịa autoimmune nke na - eme ka ị na - eme ihe ike na ọka.
Ihe bụ, ana m ahụ ndị nwere ọrịa celiac ma ha ajụ izere ọka wit kpamkpam na ihe ọzọ ị maara, ha nwere nsogbu thyroid, ha nwere nsogbu ụbụrụ, ha nwere nnukwu nsogbu afọ, na ị maara n'agbanyeghị na m gwara ha zere ọka wit ha na - enweghị ike na ya mere anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị na - ezere gluten mgbe anyị nwere ọrịa celiac, ọ dị ezigbo mkpa ịzaghachi ọka wit na ọrịa celiac otu n'ime ha ahịhịa ahihia bụ onye ọzọ dị oke dị iche na ọrịa celiac n'ụzọ doro anya na ị nwere mmeghachi omume nfụkasị na igbo onwe nke onwe ya ka ahịhịa ahịhịa bụ nsogbu na mgbe ahụkwa enweghị ndidi na-enweghị ọrịa celiac nke pụtara na ị nweghị ọrịa celiac ị nweghị ọrịa autoimmune ọrịa Celiac mana ihe ị nwere ezigbo nsogbu gluten. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị rie achịcha ọka wit, ọ bụrụ na ị rie gluten, ị ga-enwe mmetụta dị nro nke na ị gaghị azaghachi ahụike na ị ga-enwe ụfọdụ ụdị mgbaàmà ndị nzuzu nwere mana ị gaghị enwe mmeghachi omume, ọ bụrụ na anyị maara gị nke ahụ anyị n'ozuzu kwesiri ijide n'aka na anyị zere ya, ọ bụrụ na ihe ndị a bụ nsogbu anyị na - eche ihu ugbu a ka anyị gaa n'ihu ma kwuo maka ụzọ ndị ọzọ maka achịcha dị mma n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa, ọ dị mma, n'ihi na agaghị m agha ụgha ma agaghị m ahụ etu Ana m eme ebe a Agaghị m eri achịcha, agaghị m eme ka à ga-asị na ọ bụ ihe kacha njọ n'ụwa Achọrọ m achịcha n'ezie ezinụlọ m dị ka achịcha M ga-anọ ebe ahụ Kwurịtanụ banyere otu anyị si eri achịcha n'ụlọ anyị, yabụ otu nnụnnụ mmiri bụ Nhọrọ dị mma nke mbụ, ọkachasị ọ na - epupụta, ọ bụghị naanị na ọ na - apụta na epupụta usoro Belata phytic acid kamakwa mere nri bioavailable ya mere nke a bụ mma ahụike ọzọ nke ga - aghọ achịcha Ezikiel. bụrụ achịcha gbara ụka, ya mere nke a bu eghe eghe eghe eghe eghe eghe dika nkpuru-obi-ya ma ya buru na ayi bu ndi achicha achicha, a na-ewere ya dika ochicha achicha kacha sie ike na ahia ndi di nri kariri n'ihi na o bu nri Sourdough. bụkwa ihe dị oke mma n'ụlọ anyị bụ ezigbo nhọrọ mgbe anyị lere anya na aki oyibo na ntụ almọnd ọ bụ nnukwu ihe ọzọ maka ndị enweghị ike ịnwe ọka wit ma ọlị, ndị na-enweghị ike ịmị ọka ma ọlị, ma ọ bụ banyere aki oyibo na homan ntụ ọka na canola nke ị nwere ike ịzụta, mana ọ dị mfe? Iji mee ka ha nwee nkasi obi nke ụlọ, ntụ ọka ndị a dị ntakịrị siri ike isi nri, mana ozugbo ị kwụsịrị ya, ị nwere ike ịme achịcha dị ụtọ n'ime ha, yabụ agafela ma mee jide n'aka na nke a n'uche ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-enweghị ike ịnwe ọka wit ma ọlị.
Ihe ozo bu achicha igwe ojii, ugbua achicha nke igwe ojii bu ihe ndi obodo ketogenica huru n'anya ma obu ihe anyi ji otutu ulo. Anyị na-eme achịcha ahịhịa na-eme achịcha na-eme achịcha achịcha pizza na ọ nweghị ọka wit na ya dịka m kwuru na a hụrụ ya n'anya na obodo ketogenic yana ndị mmadụ na-enweghị ike iri ọka wit ma ọ bụ gluten hụrụ n'anya wee nwee Salad Wrapsokay ikpeazụ ma ọ bụrụ na anyị naanị chọrọ ịmara na enwere ike izere ihe niile, ọ dị mma mgbe niile iji kechie burger gị na letus ma ọ bụ jiri sanwichi gị na letus kama achịcha ma jiri salad a mee ihe maka uru gị mgbe ị gara ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ị hụrụ? Na-ajụ mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ya na salad kama nke achịcha n'ihi na izere achịcha ga-enyere gị aka ịmezi ahụike gị mgbe niile ma nyere gị aka ịkwụsị ibu nke jupụtara na ihe nchekwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-enyeghị ' t chọrọ ya na ahụ anyị ka anyị wee hapụ edemede a ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla tinye ya na ajụjụ a na ngalaba nkọwa dị n'okpuru ma hụ na ịdenye aha na ọwa ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị. M na-ekwu banyere ihe dị ka ibu ọnụ n'ihi na arọ ọnwụ a mgbịrịgba ngosi ya mere na ị gaghị na-atụ uche ọzọ isiokwu na lelee m ọzọ isiokwu ga-enyere gị aka mma gị na ahụ ike.
Lee gị n'isiokwu na-esonụ
Ọ dị mma iri nri kwa ụbọchị?
Achịchadị elu na carbs, obere micronutrients, yana gluten na ọdịnaya dị mkpa nwere ike ịkpata nsogbu maka ụfọdụ ndị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-ejikọkarị ya na nri ndị ọzọ, na ọka niile ma ọ bụ ụdị puru iche nwere ike inye ọtụtụ uru ahụike. N'imeru ihe n'ókè,achịchaenwere ike ịnụ ụtọ dịka akụkụ nke nri siri ike.Ọkt 23 2018
Kedu nri nke kachasị mma?
Ndị 18 ahụ ikeAchịchana mbara ala
Arnold Whole Grains: Ugboro abụọ Fiber.
Glutino Gluten Multigrain Na-eme AmịAchịcha.
Pepperidge Ugbo Ugbo Oatmeal.
13 & 14. Eze onye mba.
Pepperidge Farm Deli Flats, Soft 100% Wheat Niile.
Sara Lee ItaliantalianAchịcha.
Arnold Whole Grains: Ugboro abụọ Protein.
La Brea Bakery Telera mpịakọta.
Ego ole m ga-eri n’ụbọchị iji belata ibu?
Mana nyocha dị mkpa, ndị dere nyocha ahụ na-ekwu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ihe akaebe na-akwado usoro nduzi nri US kachasị ọhụrụ, nke na-ekwu na 'ahụike' 1,800-to-2,000-kalorinri nwere ikegụnyere isiiMpekere achịchakaụbọchị—Gụnyere na atọMpekerenke “ọka a nụchara anụcha” na-acha ọchaachịcha.Dec. 8 2018
Ekele ole ka m kwesiri iri kwa ubochi?
Mana nyocha dị mkpa, ndị dere nyocha ahụ na-ekwu. Imirikiti ihe akaebe na-akwado usoro nduzi nri US kachasị ọhụrụ, nke na-ekwu na nri 'ahụike' 1,800-to-2,000-kalorinwere ikegụnyere isiiMpekere achịcha otu ụbọchị—Gụnyere na atọMpekerenke “ọka a nụchara anụcha” na-acha ọchaachịcha.Dec. 8 2018
Mpekere achịcha 3 ọ karịrị akarị?
Mana nyocha dị mkpa, ndị dere nyocha ahụ na-ekwu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ihe akaebe na-akwado usoro nduzi nri US kachasị ọhụrụ, nke na-ekwu na nri 'ahụike' 1,800-to-2,000-kalori nwere ike ịgụnye isiiMpekere achịchaotu ụbọchị — gụnyere ruoMpekere atọnke “ọka a nụchara anụcha” na-acha ọchaachịcha.Dec. 8 2018
Ọ dị mma iri achịcha aja aja kwa ụbọchị?
Oka zuru ezuachịchaa na-eme ya dumọka witkernel, nke putara na o jigidoro eriri ya nile na nri di nkpa dika iron, zinc, na vitamin B. Mgbena-eri nridumachịcha ọka witiri akwa ụbọchịndabere nwere ike ịba ọtụtụ elele, otu a agaghị ekwu maka ọcha.June 24. 2020bọchị 2020
Ego ole ka ị ga-eri kwa nri?
NyeAchịchasite na aru ike ha
“I nwere ike iri nriachịchakwa ụbọchị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị belata onwe gị karịa 2-3 ounceskwa nri, ”Ka Hunnes na-ekwu. “Ma, ihe dị mkpa karịa bụ ụdị nkeachịchaa na-eri ya.Ọgọst 18 2020
Eji mpekere ọka bred ole ka m ga-eri n’ubọchi?
Yabụ ọ bụrụ n'ịgbalị ime ka ibu gị dị ugbu a, ịnwere ikerie ruo 12Mpekere achịcha ọka wit niilemakaụbọchị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ibu, ị nwere ike ịrapara na 8Mpekeremakaụbọchịna nke ahụ dabere na nri gị na-enye carbohydrate n'oge niileụbọchị.Ọnwa Ise 21, 2018
Gini mere achịcha gbara ụka ji bụrụ achịcha kachasị mma ị ga-eri?
'Ọ bụrụ na a na-eji usoro ihe ọ sourụ sourụ na-eme nri ala na-eme ya na ọka niile, achịcha na-eko achịcha na-enye nri nke ọka niile tinyere uru nke gbaa ụka, nke na-ebelata pH achịcha,' ka Mowrer kwuru. “Nke a pụtara na a na-etinyekwu vitamin na mineral.
olee mgbe njegharị de france na-akwụsị
Kedu ụdị achịcha kachasị mma maka gị?
Maka Omega-3 abụba abụba, ahụike mmanụ, na mmanu mmanu bụ ihe kachasị mma na isi anụmanụ, n'otu n'otu. Ma maka ndị anaghị eri anụ, nke ahụ abụghị nhọrọ (ya bụ, ihe ndị na-emepụta anụmanụ bụ ihe anaghị aga). Otú ọ dị, osisi flax dị. Ya mere, ọ bụ achịcha flaxseed na-enweghị nchekwa bụ nnukwu ihe ọzọ na achịcha gị mgbe niile.
Kedu ụdị achịcha dị mma maka ahụ ike afọ?
Na omenala emere site na onye na-ebu ụzọ kwee ike na achịcha wholegrain rye ntụ ọka, pumpernickel bara ọgaranya na stachi na-eguzogide ọgwụ nke na-akwado ahụike afọ ma na-ebelata akara glycemic achịcha. Lelee aha mmado, n'ihi na ọtụtụ ụdị azụmahịa gụnyere ntụ ọka wheat, molasses na yist.
beta alanine ịgba ígwè
Beta alanine ịnyịnya ígwè - onye ndu kachasị
Beta Alanine ọ dị mma maka ndị ịgba ịnyịnya ígwè? Beta alanine na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ọ na - eme ka ogo carnosine dịkwuo elu ma, site na imeziwanye nchekwa sel, ọ na - ebelata lactate ọkwa yabụ onye na - agba ịnyịnya ígwè, triathlete, bọọlụ bọọlụ ma ọ bụ onye na - egwu mmiri nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Beta alanine kachasị arụ ọrụ nke ọma maka sprints na obere oge.
garmin ime ụlọ ịgba ígwè
Garmin na-agba ịnyịnya ime ụlọ - ịza ajụjụ ndị a
Kedụ ka m ga-esi gbasi ịgba ịnyịnya ígwè n'ime Garmin m? GarminSwipe ozugbo ọzọ. Mgbe ahụ, họrọ Cadence. Ugbu a, ị ga-enyocha ma chọpụta ihe mmetụta ahụ. Dị ka ịchọta ya, mepee ya. Mgbe nke a gasịrị, tinye nha ụkwụ gị.Mgbe ịmechara nke a, gaa na menu nke kachasị ma họrọ ọrụ gị dị ka ime ụlọ. N'ikpeazụ, tinye elekere na igwe gị. Malite pedal na enweta na Start.15. 2020.
ịgba ịnyịnya quads
Gba ígwè quads - eme ihe ndị metụtara usoro
Linggba ígwè na-ewu quads? A na-arụ ọrụ Quadriceps nke ukwuu n'oge ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ dị mkpa iji wuo ụlọ iji sie ike na igwe kwụ otu ebe. Ọzọ, ịgba ịnyịnya ígwè na-elekwasị anya uru ahụ ndị na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ, nke a na-akpọkarị buttocks. Mkpụrụ ahụ atọ dị na otu egwuregwu gluteus gụnyere gluteus maximus, gluteus medius, na gluteus minimus.4. 2018.
nitric oxide ịnyịnya ígwè
Nitric oxide cycling - esi emeso
Nitric oxide ọ dị mma maka ịgba ígwè? Ọ bụ ezie na a na-atụ aro oxide nitric maka ndị na-arị ugwu, uru ndị na-akwalite ume na-eme ka ọ dị oke mma maka ndị ịgba ígwè. Ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụike na ịgba ịnyịnya ígwè na-akọwa etu mgbakwunye a si eme ka arịa gbasaa, na-enye ha ohere iduzi ọbara na oxygen n'akụkụ ndị chọrọ ha, dịka ụkwụ maka ndị na-agba ígwè.
Uwe na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi emeso
Kedu ihe kacha mma maka ịnyịnya ígwè? Industlọ ọrụ Chrome na-aba uru ma a bịa ịgba ịnyịnya ígwè ndị mepere emepe. Ha maara na ngwakọta zuru oke n'etiti ụdị na ọrụ na Madrona Pants bụ nnukwu ihe atụ ọzọ na nke a. Madrona Pants na-egosipụta akwa na mgbatị siri ike, ahụhụ na-eche echiche, ụzọ anọ ma na-enyekwa ume ọtụtụ ume.
doping na ịgba ígwè
Doping na ịgba ígwè - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ihe doping pụtara na ịgba ịnyịnya ígwè? Ihe ndị a bụ ndepụta ezughị ezu nke ikpe doping na ebubo ugboro ugboro nke doping na ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara, ebe doping pụtara 'iji ihe ndị metụtara ahụike ma ọ bụ usoro na-adịghị mma iji nweta mmụba nke arụmọrụ'.